Saddex qof oo ku dhaawacmay diyaarad ku burburtay Beledweyne - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSaddex qof oo ku dhaawacmay diyaarad ku burburtay Beledweyne
July 14, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Burburka diyaarada oo la arki karo qiiq ka baxaya. [Isha Sawirka: Facebook]
Beledweyne-(Puntland Mirror) Diyaarad ka diiwaangashan dalka Kenya ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne maanta oo Talaado ah.
Ma jirto cid ku dhimatay balse waxaa jira ilaa saddex qof oo ku dhaawacmay, sida ay sheegeen masuuliyiinta garoonka.
Diyaarada oo ka soo duushay dalka Jabuuti ayaa raashin u siday ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM). Gebi ahaan raashinkii ayaa gubtay.
Cilada keentay burburka diyaaradda si rasmi ah looma sheegin, balse wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in cilad katimid taayirada markii ay soo cago-dhigatay uu sababay in diyaaraddu ay ka baxdo dhabaha.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa cafis u fidiyay 66 maxbuus oo ku kala jira xabsiyada gobolada Puntland, sida lagu sheegay war-saxaafdeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Maxaabiista ayaa loo cafiyay [...]